Nhoroondo yeiyo gastronomy yeIndia, tsika dzayo uye zvakajairwa ndiro | Absolut Kufamba
Nhoroondo yeGastronomy yeIndia
Louis Martinez | | Updated on 25/01/2021 21:16 | India
Nhoroondo yeiyo gastronomy yeiyo India inotanga mumhute yenguva. Nekudaro, isu tinokwanisa kusimbisa yengano nguva iyo inoisa mavambo ayo mune iyo nguva mairi vachenjeri veHimalaya vakawana zvinonhuwira.
Iyi ngano haina basa, nekuti aya madonhwe aigara aine kukosha kukuru muIndia chikafu. Muchokwadi, izvo ndezvimwe zvezvikonzero nei zvichizivikanwa kutenderera pasirese uye nei zvirizvo imwe yeakanyanya kukoshesa gastronomies pasi. Kana iwe uchida kubika uye uchida kuziva zvakawanda nezvenhoroondo yeIndia gastronomy, tinokukoka iwe kuti uverenge chinyorwa chedu.
1 Nhoroondo yeIndia gastronomy: yetsika mavambo
1.1 Iyi tsika yakatanga
1.2 Kunze kwekune dzimwe nyika
1.3 Zvinonhuwira, zvakakosha munhoroondo yeIndia gastronomy
2 Iyo yekudya protocol muIndia
3 Zvimwe zvakajairwa ndiro dzeIndia
3.1 Dal, manyorero eIndia
3.2 Chapati, iyo quintessential Indian chingwa
3.3 Pulau mupunga, simba reMongolia munhoroondo yeIndia gastronomy
3.4 Tandoori huku, yechinyakare
3.5 Samosa, Starter inonaka
3.6 Raita, inozorodza kugaya chikafu
3.7 Lassi, chinwa par kugona
Nhoroondo yeIndia gastronomy: yetsika mavambo
Indian cuisine, senge pese pese pese, mhedzisiro yekudikanwa kwekugadzira ndiro dzinonaka kune vanodya. Asi pamusoro pezvo, zvinogona kunge zvakatanga ne tsika yechinangwa, chimwe chinhu chinosiyanisa nacho kubva kune mamwe gastronomies.
Iyi tsika yakatanga
Chokwadi, chiHindu chikafu pakutanga chaive ne hunhu hunoyera. Mumatembere madhishi akagadzirwa ayo aipiwa kuna vamwari se mutero. Asi, panguva iyoyo, ivo vakashanda sechikafu chevafambi. Nekudaro, mazhinji eaya anonzi kurapa zvivakwa.
Muchokwadi, kuita uku kuchiri kuenderera. Chikafu chinopihwa kuna mwari chinonzi bhog uye zvinongo gadzirwa ne zvigadzirwa zvinotorwa zvakananga kubva kune zvakasikwa. Iwe hausi kuzowana mairi yakagadziriswa. Inotopisirwa chete neyakaenzana enhau anowanzoitika akadai semiti yemiti kana makokonati makomba, pasina gasi kana magetsi.
Garam masala zvinonhuwira
MaIndia anokoshesa zvakanyanya kuita uku zvekuti kuve mubiki mutembere kunopa hukuru hwemagariro. Saizvozvowo, mhosva yacho iri nhaka mumhuri. Ani naani anogadzira ndiro anofanira kutanga ageza nekuchenesa imba yekubikira.
Kune rimwe divi, mwari wega wega wechiHindu ane chikafu chayo chakabatana. Semuyenzaniso, Ganesha, inozivikanwa nemusoro wenzou, kunyange ine yayo gastronomic festival. Munguva iyi, mbatatisi inogadzirwa nemuto weiyo yogati nezvinonhuwira zvinopihwa vese varume uye, chaizvo, kune nzou.
Ipo India payakakwenenzverwa, gastronomy yayo yakagamuchira akasiyana mafambiro ekunze. Asi yakaramba ichiyera kuvaHindu. Unogona kuwana pfungwa yeizvi kana tikakuudza kuti chikafu chekutanga chemucheche chakafukidzwa ne mhemberero huru, sekunge kubhabhatidza kwako kana muchato.
Pakati pezvikafu izvo zvakakanganisa gastronomy yeIndia kwemazana emakore ndeaya ChiPutukezila muslimla persian and the Chirungu kunyanya. Nekuda kweizvozvo, Indian gastronomy inozivikanwa neayo akakura akasiyana siyana evhenji, mavara uye mavara, pamwe nekukosha kukuru kwakaiswa pairi zvinonhuwira, miriwo uye mupunga.
Zvinonhuwira, zvakakosha munhoroondo yeIndia gastronomy
Isu tatove tataura pamusoro penyaya ino kukosha kwezvinonhuwira muIndian chili. Asi ndeyekuti ivo vanoumba hunhu hwayo hwakanyanya. Pakati peanonyanya kushandiswa pane turmeric, kumini, ginger, chili, rai kana nhema mustard uye coriander. Asi zvakare turmeric, fenugreek, coriander, safironi uye hing kana asafoetida chirimwa.
MaIndia anopa kukosha kwakanyanya kune zvinonhuwira zvekuti ivo vanotoita musanganiswa wavo. Yakakurumbira kwazvo ndiyo inonzi garam masala, iyo inoumbwa neshanu. Aya ndiwo anowanzo sinamoni, clove, nutmeg, nhema mhiripiri, uye cardamom.
Asi chinonhuwira chakakurumbira ndeche curry upfu, iyo inogadzirwa nekukuya iyo curry chirimwa pachayo pamwe nemhando dzakasiyana siyana dzadzo. Izvo zvakagadzirwawo curries mumuto. Iyo yakanakisa yeiyi marinade inozivikanwa se vindaloo uye izvo, zvinoshamisa, ndezvePutukezi mavambo. Ivo vane mukurumbira zvakaenzana iyo saag and the madras.
Iyo yekudya protocol muIndia
Isu tanga tichikuudza kuti maHindu anokoshesa chikafu. Ndosaka zvisingafanire kukushamisa kuti ivo vanomuperekedza mune zvese tsika. Iwo madhishi anogoverwa mumudziyo mumwe chete uye zvirimo zvinotorwa neruoko rwerudyi, kunyanya neminwe mina, sezvo zvese indekisi yeruoko irwo nezvigunwe zvekuruboshwe zvinofungidzirwa kuti zvakaitirwa zviito zvisina kuchena.
Saizvozvo, kana mumwe munhu akakupa chikafu neruoko rwake kuIndia, usazvinetse. Icho chiri kuratidza ruremekedzo uye mutsa. Mupfungwa imwecheteyo, kana ukaramba chikafu chavanokupa, unenge uchiratidza a asina hunhu uye vachagumbuka.
Zvimwe zvakajairwa ndiro dzeIndia
Nhoroondo yeiyo gastronomy yeIndia yakasiya akawanda chaiwo madhishi ayo ave kuzivikanwa pasi rese. Zvingave zvisingaite kuti titaure zvese kwauri. Nekuti nzvimbo yega yega yenyika hombe ine yayo. Isu tichagadzirisa, saka, nekukuudza iwe nezve zvimwe zvacho yakakurumbira uye inonaka.
Dal, Manyorerwe eIndia
Dhari ari lentiy stews Zvinosiyana zvichienderana nenzvimbo dzeIndia. Nekudaro, kazhinji, vese vane legume iri, kunyanya iri yakatsvuka fomu, uye ginger, turmeric negariki. Vanoshumirwa nemupunga nechingwa.
Chapati, iyo quintessential Indian chingwa
Chaizvoizvo, chingwa chinowanzozivikanwa cheIndia chiri chapati, iyo inogadzirwa nemhando yeupfu hwese hwegorosi uye ine chimiro chakafanana neicho chedu makeke. Zvichienderana nemabatirwo ayo, inogamuchira mazita akasiyana. Saka, iyo naan Inogadzirwa muchoto, inowanzo kunamirwa kumadziro ehovhoni. Kune rimwe divi iyo roti Iyo inoitwa pane iyo grill uye iyo puri yakakangwa. Kune rimwe divi, iyo paratha Chingwa chakazara nemuriwo.
Rice chitsuwa, simba reMongolia panhoroondo yeIndia gastronomy
Mupunga unogadzirwa muIndia nenzira churu dzakasiyana. Asi chinyakare zvikuru ndicho chinonzi mupunga chitsuwa o pilau, Yakagadzirwa nemiriwo, zvechokwadi zvinonhuwira uye MaMongolian-maitiro enyama. Kufanana kumwe chete kunoreva kuti michero inowedzerwawo kwazviri.
Pollo tandoori, yechinyakare
Idya iyi haisi yechinyakare chete muIndia, asi zvakare yakave yakasarudzika mumaresitorendi eIndia kuMadokero. Izvo zvinogona zvakare kuitwa nenzira dzakasiyana siyana, asi zviri, mune yayo yepamoyo vhezheni, huku yakamonerwa uye yakarungwa iyo inogadzirwa muchoto. Muchokwadi, zita rayo rinobva mukuti yakabikwa mukati hovhoni tandoori, Yakagadzirwa nevhu.
Samosa, kutanga kunonaka
Icho, pamwe, ndiro inozivikanwa kwazvo yeIndia kune dzimwe nyika, zvakafanana nezvinoitika nematsutso ematsutso mu Chinese cuisine. Samosa ndiye dumpling yakaomeswa yemapatatisi, mapizi, hanyanisi nezvinonhuwira. Nekudaro, iwe unogona zvakare kuiwana iine mimwe miriwo kana nehuku.
Raita, kugaya chikafu kunozorodza
Chaizvoizvo, iri yoghurt inosanganiswa nemiriwo, kunyanya cucumber, nemiti inonhuhwirira. Nekudaro, kune zvakare kune chiuru chakasiyana tsananguro muHindu gastronomy.
lassie, quintessential chinwiwa
MaHindu vanonwa zvakanyanya mukaka tii. Asi zvimwe zvakajairika ichiri iyo lassie, Yakagadzirwawo kubva kugati yemvura kune michero yakaita sebhanana, mango kana papaya inowedzerwa.
Mukupedzisa, isu takuratidza iwe yakanaka chikamu che nhoroondo yeIndia gastronomy, pamwe neyavo tsika panguva yekudya kwemasikati uye zvimwe zvacho kunyanya zvakajairika ndiro. Zvino iwe unongoda kusarudza kuti uzviedze. Iwe hauzombozvidemba sezvo ivo vachinaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Nhoroondo yeGastronomy yeIndia